USA: Gabar 7 jir ah oo ka lugeysay goob diyaarad kula dhacday – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
USA: Gabar 7 jir ah oo ka lugeysay goob diyaarad kula dhacday
A warsame 4 January 2015 4 January 2015
Booliska Mareykanka ayaa sheegaya in gabar yar oo ka bad baadiyay shil diyaaradeed, laga saaray cisbitaal ay ku sugneyd.
Gabadha oo 7 sano jir ah ayaa kasoo lugeysay halka ay qoyskeeda diyaaradda kula dhacday, iyada oo soo socotay masaafo ka badan hal kilo mitir, si ay caawimaad u raadsato. Shilka ayaa ka dhacay meel keyn ak oo ku taalla gobolka Kentucky.
Gabadha ayaa tagtay guri halkaa ka dhowaa, waxaana dadkii joogay ay u sheegtay in qoyskeedii uu ku dhintay shilka diyaaradda.
Kooxaha samata bixinta ayaa markii dambe deegaankaasi ka helay meydadka waalidka gabadha, gabar la dhalatay iyo qof ehelkooda ah.
Diyaaradda qoyska siday ayaa burburtay kaddib markii ay hawada xumaatay. Sarkaal ka tirsan booliska ayaa sheegay in gabadhan la siin doono abaalmarin maadaama ay muujisay geesinimo.
Wasiir ku xigeen tirsan maamulka Juba oo ku dhaawacmay shil gaari
Nicholas Kay: Guulo badan ayaa laga gaaray dagaalka lagula jiro Alshabaab